- सेयर बजारलाई वामपन्थी सरकारको नीतिले कता लैजाँदै छ ?
सेयर बजारलाई वामपन्थी सरकारको नीतिले कता लैजाँदै छ ?
काठमाडौंः अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछि सेयर बजार नेप्सेमा लगातार घटबढको भइरहेको छ । सरकारले जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट घोषणा गरिरहँदा नेप्से एक हजार ३ सय १७ अंकभन्दा माथि भए पनि अहिले करिब एक हजार दुई सय अंकको नजिक आएको छ ।
अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सेयर बजारमैत्री बजेट ल्याउने आशामा बसेका सेयर लगानीकर्तामा एकाएक निराशा आयो, जब अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा पुँजी बजारलाई उत्साहित गर्ने नयाँ योजना समेटेनन् । उनले घोषणा गरेका न्यूनतम ५० करोड पुँजी भएका कम्पनीलाई सेयर निष्काशन गर्न दिइने र उत्पादनमूलक कम्पनीलाई अनिर्वाय सेयर निष्काशनको नियम लागू गर्नेबाहेक अन्य सुधारात्मक योजना समेटेनन् ।
त्यो बजेट भाषणपछि नेप्सेमा सुधार आउने बताइए पनि सेयर बजारमैत्री बजेट नभएकाले त्यसयता लगातार गिरावट आइरहेको नेप्सेमा बीचबीचमा घटबढ देखिएको छ । तर, सेयर लगानीकर्ताले स्थायी भनिएको कम्युनिष्ट सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । जसकारण सेयर बजारमा कारोबार पनि भएको छैन । सुरुदेखि नै मन्त्री खतिवडालाई पुँजी बजारमा प्रतिकूल नीति अवलम्बन गर्ने व्यक्तिका रुपमा लिइन्थ्यो । अझ उनका केही विवादित भनाइपछि र सेयर बजारमा नकरात्मक असर देखिएपछि दोष उनैलाई दिइँदै आएको छ ।
अझ गत शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस सेयरका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ मान्ने र सोभन्दा बढीको कारोबार भएमा कारोबार अनुसार लाभकर तिर्नुपर्ने गरेपछि कारोबार ठप्प नै भएको थियो ।
सरकारले लागू गरेको लाभकरको विरोधमा सेयर लगानीकर्ता मात्र नभई नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र सेयर लगानीकर्ता संघले समेत कडा विरोध गरेका थिए । लगानीकर्ताले सोमबारदेखि आन्दोलन जारी गर्दै मंगलबारदेखि कारोबार ठप्प पारेपछि सरकारले बुधबार लगानीकर्तासँग सहमति गर्दै कारोबार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयो ।
आन्दोलनपछि अर्थमन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सहमति जुटेपछि कारोबार पुनः बुधबार अबेरदेखि सञ्चालनमा आयो । सरकराविरुद्धको आन्दोलनमा जित महसुस गरेका लगानीकर्ता हौसिएपछि नेप्सेमा १३ अंकको वृद्धि भयो भने २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । यस्तै यही साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्सेमा २५ अंकको गिरावट आउँदा कारोबार ४६ करोड रुपैयाँ माथि भयो । यसले अझै पनि सेयर लगानीकर्ता सरकारको पुँजी बजार नियमनप्रति सशंकित भएको जस्तो देखिन्छ ।
निर्वाचनअघिदेखि नै घट्दै आएको सेयर बजार कम्युनिष्टको स्थायी सरकार गठन भएपछि बढ्ने कल्पना धेरै लगानीकर्ताले गरेका थिए । बजार बढ्ने आसमा बसेका लगानीकर्ताले त्यसयता निराशा मात्र पाएका छन् । साथै, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव प्रचारका क्रममा नेप्सेमा देखिएको घटबढका बीच लगानीकर्तालाई दिएका अभिव्यक्तिले पनि सेयर व्यवसायीलाई आश देखाएको थियो । उनले कम्युनिष्ट सरकार गठन भएपछि नेप्सेमा सुधार ल्याउने र गहिरो अध्ययन गर्ने बताएका थिए ।
निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको हप्ता दिनसम्म बजारमा केही सुधारात्मक अवस्था देखियो, त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई ल्याइएपछि बजारमा सकरात्मक सुधारको संकेत देखियो ।
तर, सेयर बजारलाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाएकाहरु त्यतिबेला त्रसित बने जतिबेला अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनभित्रै सेयर बजारप्रति बीबीसीबाट विवादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । उनले बीबीसीबाट सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र भएको बताएपछि सुधारको क्रममा रहेको नेप्सेमा एक्कासी पहिरो गयो । मन्त्री युवराज खतिवडाको उक्त अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएपछि उनले सार्वजनिक रुपमै आफूले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र नभनेको बताएका थिए ।
सरकार पुँजी बजारलाई उत्साहित बनाउनभन्दा पनि नयाँ–नयाँ प्रोपोगाण्डा गरेर निरुत्साहित गराउन उद्यत रहेको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका बेला सरकारले पुँजी बजार तथा समग्र निजी क्षेत्रप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
अर्थतन्त्र पढ्नु र बुझेर व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो । यतिबेला अर्थमन्त्रीको क्षमताको परीक्षणको समय पनि छ । पुँजी बजारका बारेमा बारम्बार नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थनीतिका बारेमा अन्य जानकारहरुसँग परामर्श गर्न पनि रुचाउँदैनन् ।
निजी क्षेत्र नाफामुखी हुन्छ र लगानी डुबाउने गरी कसैले पनि लगानी गर्दैन भन्ने कुरालाई खतिवडाले मनन् नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजी लगानी प्रवर्धन हुन कठिन छ । साथै, झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन साना दललाई सरकारमा सामेल गर्नु, प्रदेश नं २ मा पनि कम्युनिष्ट सरकार निर्माणका लागि कसरत हुनु, उत्तरी छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानु, अधिकार जति प्रधानमन्त्री मातहत केन्द्रित गर्ने जस्ता धेरै कुराहरुले कम्युनिष्ट सरकार के गर्न खोज्दैछ ? भनेर लगानीकर्तामा आशंका बढ्नु स्वाभाविक हो ।
सँगसँगै पुँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार– चढाव र चलखेलले गर्दा पनि धेरै मानिसहरुमा यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन । त्यस कुरामा सरोकारवालाहरु सचेत र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । दस लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र वा जुवाघर भनेर यसलाई धराशायी बनाउन हुँदैन । यस्तो स्थिति आउन नदिन लगानीकर्ताका अगुवादेखि स्टक ब्रोकर अझै बढी चनाखो हुनु जरुरी छ ।